ငွေကြေး လာဘ်ရွင်အောင် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ပြုလုပ်ရမည့် ယတြာ…..
ငွေကြေး လာဘ်ရွင်အောင် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ပြုလုပ်ရမည့် ယတြာ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် အတွင်း စာရွက် အဖြူ တစ်ရွက်ပေါ်မှာ “န” အက္ခရာ ရေးသားပါ..။ ပြီးလျှင် “န” အက္ခကို ပတ်၍ “ဝလုံး” ရေးသားပါ ထို […]
သင်ဘာလုပ်လုပ် ဘာကိုင်ကိုင်အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများ အခက်အခဲမှ ကျော်လွန်စေမည့် ယတြာ
သင့်ကို အမြန်ဆုံး ဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့် (၅)မျိုး..
ချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်းဆိုတာ ရှိသလို၊ ဆင်းရဲမယ့် နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကို မသိသေးသူတွေက ဆင်းရဲစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရအောင်ရှောင်ရှားလိုက်တာနဲ့ ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကို တစ်ဖက်ကနေ ပြန်လည်ကျင့်သုံးရာ ရောက်စေမှာပါ။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်ကို အမြန်ဆုံး ဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်(၁၀)မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်ရှားကြပါ။ (၁) ကိုယ်ရှာနိုင်တာထက် ပိုသုံးရင် […]
သမီး ဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေ၊ အမေရယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာလေးရယ် ..
သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေ၊ အမေရယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ်…. ” လူထွက်တော့မယ် အဖေရယ် အမေရယ် ကလင်.……… ကလင် ဖုန်းခေါ်သံလေးကြားပြီးကိုင်လိုက်တော့ ဟဲလို ……… သမီးလား ဟုတ်တယ်အမေ သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေအမေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် အေးပါကွယ် အမေ့ဆီသီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးတော့ပြန်ခဲ့ပါကွယ်။ ဒေါ်တင်မေ တစ်ယောက်အတွေးများစွာနှင့်နေပြီးစဉ်းစားနေတော့တယ်။မွေးထားတဲ့သားသမီး ၃ […]
၂၀၂၀ နှစ်အလယ်ပိုင်းကစလို့ ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရမယ့် ရာသီခွင်(၅)ခု.
လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်းဆိုတာ သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်၊လုပ်ရပ်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတာပါ။ စိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကင်ပေါ်က နက္ခတ်ဂြိုဟ်ခွင် လွှမ်းမိုးမှုအပြောင်းအလဲတွေက မိမိရဲ့ရာသီခွင်မှာ အပြောင်းအလဲကိုဖြစ်စေပြီး ကံအကောင်း၊ အဆိုးကိုသက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ နက္ခတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ တွက်ချက်မှုတွေအရ အခုနှစ် ၂၀၂၀ အလယ်ပိုင်းမှာ ကံကောင်းလာတဲ့ရာသီခွင်တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ …. သိဟ်ရာသီဖွား (July 23 – August […]
လှိုင်သာယာစက်မှူ့ဇုန်မှ တရုတ်နည်းပညာရှင်တစ်ဦး အသတ်ခံနေရတဲ့ CCTV ထွက်ပေါ်.
လှိုင်သာယာစက်မှူ့ဇုန်မှ တရုတ်နည်းပညာရှင်တစ်ဦး အသတ်ခံနေရတဲ့ CCTV ထွက်ပေါ် “ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်မှ တရုတ်နည်းပညာရှင်တစ်ဦး အသတ်ခံရ”CCTV ထွက်ပေါ် မေလ(၁၁)ရက် ညနေ(၃:၃၀)တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အလယ်ကျေးရွာ၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ ဦးထွန်းညိုလမ်းမဘေး ရပ်ထားသော ကားတစ်စီးပေါ်တွင် လူတစ်ဦးဓါးဒဏ်ရာများဖြင့် လဲနေကြောင်းသတင်းအရ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်အဖွဲ့ အခင်းဖြစ်နေရာသို့သွားခဲ့ရာ ကားပေါ်၌ တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဓါးဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ […]
တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လား ထွက်ပြေးပြီ. .
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည့် တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားသည် Hotel Quarantine မှ ထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်းအား Quarantine ထား ရှိခဲ့သည့် ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်မှ City Hotel Yangon အား မေ ၁၁ ရက် ညနေ ၅နာရီက ဖုန်းဖြင့် […]